भ्यालेन्टाइन्स डेमा विभिन्न होटलमा प्रहरीको छापा, २ दर्जन बढी अविवाहित प्रेम जोडी पक्राउ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भ्यालेन्टाइन्स डेमा विभिन्न होटलमा प्रहरीको छापा, २ दर्जन बढी अविवाहित प्रेम जोडी पक्राउ
भ्यालेन्टाइन्स डेमा विभिन्न होटलमा प्रहरीको छापा, २ दर्जन बढी अविवाहित प्रेम जोडी पक्राउ
फागुन ३ गते, २०७६ - १२:५१
एजेन्सी । १४ फेब्रुअरीमा संसारभरीका विभिन्न देशका युवापुस्ताले भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने क्रममा थुप्रै प्रेम जोडीले पुलिस कारवाहीको सामना गर्नुपर्‍यो ।
मुस्लिम बहुल देश इन्डोनेशियाका केही हिस्सामा पुलिसले होटलमा छापा मारेका छन् जसमा दुई दर्जन बढी अविवाहित जोडीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार इन्डोनेशियामा खुल्ला रुपमा प्रेम गर्न प्रतिबन्ध छ र यसलाई देशको संस्कृति र नैतिकताविरुद्ध मानिन्छ । इन्डोनेशियाको मकस्सर र डेपोकमा आधिकारीले मानिसहरुलाई सार्वजनिक रुपमा प्रेम व्यक्त नगर्न चेतावनी पनि दिएको थियो ।
मकस्सरमा पुलिसले होटलमा छापामारी गर्दै कोठामा भएका अविवाहित जोडीलाई पक्राउ गरे । यीमध्ये एक जर्मनी व्यक्ति पनि समावेश थिए ।
हामीले एक जर्मनी नागरिकलाई उनकी इन्डोनेशियाली पार्टनरसँग मोटलमा भेट्यौं । उनीहरु श्रीमान् श्रीमती थिएनन् त्यसकारण पक्राउ गर्‍यौं,’ स्थानीय सार्वजनिक आदेश कार्यालयका प्रमुख इमान हुडले बताए । पछि पुलिसले पक्राउ गरिएका जोडीलाई ‘विवाह अघिको यौनसम्पर्कले निम्त्याउने हानी’ बारे लेक्चर दिएर छोडिदिएको बताइएको छ । तर पक्राउ परेका पाँच यौनकर्मीलाई पुनर्स्थापना केन्द्र पठाइने निर्णय गरिएको छ ।
मकस्सरमा कण्डमको बिक्रीमा पनि विभिन्न प्रकारको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कण्डम खरिद गर्नेहरुको उमेर पुगेको हुनुपर्छ । स्थानीय अधिकारीका अनुसार कण्डम विवाहित वयस्कका लागि मात्रै हो ।
मकस्सर अधिकारीले कतै पसलमा खुल्ला रुपमा कण्डम बेचिएको त छैन भनेर निगरानीसमेत गरेका थिए ।
फागुन ३ गते, २०७६ - १२:५१ मा प्रकाशित
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण,
काठमाडौं । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ । उच्च...
नागार्जुनमा विदेशबाट आएका ८९ ‘होम क्वारेन्टाइनमा’
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । कोरोना भाइरस...
नेकपा झापाद्वारा कोरोना नियन्त्रण कोषमा एक लाख सहयोग
झापा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले स्थापना गरेको ‘ सहयोग गरेको...
नयाँ दिल्ली । भारतमा शुक्रबारसम्म दुई हजार ३०१ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । यस सङ्क्रमणबाट...
कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरु बढ्दै : झण्डै दुई अर्ब सङ्कलन, कसले कति सहयोग गरे ?
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा लोकोत्ति प्रसिद्ध छ । त्यो हो, ‘एकले थुकी सुकी, सयौंले थुकी नदी ।’ यस्तै भएको...
कोरोना सङ्क्रमित बोक्न हिडेको एम्बुलेन्सको चालक हराएपछि…
काठमाडौं । बिहीबार साँझ नेपालमा छैटौं कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको खबरले अनलाइन मिडियाहरु भरिएका...
कोरोना भाइरस महामारी दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो चुनौती
काठमाडौं । कोविड–१९ नाम दिइएको प्राणघातक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विश्वभरीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या...
कोरोनाको कहर : दुहेको दूध गाईलाई नै खुवाउँदै किसान
कास्की । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ बाघमाराका अगुवा कृषक ठाकुर आचार्यका गोठमा ६० वटा गाई छन् । केही...
तरुण दलको आग्रह : आफू पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं’
कास्की । तरुण दल कास्कीले लक डाउनको पालना गर्दै ‘आफू पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं’ भन्ने सिद्धान्तलाई...
दिनमा चार पाँच पटक हात धुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह : तर स्थानियबासी भन्छन् – खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड —१९ ) को सम्भावित जोखिम हुनबाट जोगिन साबुन पानीले दिनमा चार पाँच पटक हात...
यी हुन् कोरोनाले रोकिएका विश्वका प्रमुख खेल (सूचीसहित)
लकडाउन उल्लंघन गर्दा पक्राउ परेका १ सय ६ जना अनुशिक्षण लिएर फर्के
सीमानामा अलपत्र नेपालीलाई खाना खुवाउँदै भारतीय जिल्ला प्रमुख
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई